Landa i- CrusaderF8 v1.00 FSX & P3D - Rikoooo
Play 9 265
Umbhali: Laborie Roland, uLaurent correia, uJean Pierre Langer, uJean Pierre Bourgeois, FSX ukubuyekeza nguDanny Garnier
Isengezo esigcwele kakhulu futhi esinemininingwane sakhiwe nguRoland Laborie (ongumFulentshi). Ekuqaleni bekunge-FS2004 kepha sibonga kumngani wethu uDanny Garnier manje kuyahambelana (port-over) no FSX or Prepar3D. Kubandakanya i-cockpit ebonakalayo (VC), ukubuyisa okuyishumi nambili kanye nezinhlobo ezahlukahlukene, imisindo yangokwezifiso, izithombe (zomlilo, amabhomu, imicibisholo, njll.), Imiphumela (post-combustion, njll) nezinye izinto eziningi ezinhle.
F-8 eziMpini Zenkolo (ukusuka F8U) iyinhlangano leSupersonic fighter aircraft eyakhelwe by Vought United States, futhi kunganqatshelwa ezindizeni othwala. It libhekene i itheku emoyeni futhi acinene variable legciwane airfoil. Naphezu umthwalo eyengeziwe ngenxa imishini yayo asolwandle, libonisa ukusebenza efanayo njengoba uzakwabo emhlabathini-based yayo, North American F-100 Super Sabre.
Ngezansi, imibhalo ye-ephelele in French with izithombe (ezifakwe isengezo)
Repaints futhi lwakamumva